Emva kweZiphumo sele zikuvumela ukuba ususe izinto kwiividiyo ngendlela elula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe ikufundisa ukuba ungazisusa njani iividiyo emva kweZiphumo
Emva kwesiphumo sisixhobo esikhulu semveliso yevidiyo esivumela ukuba sisuse izinto ezihambayo njengoko iAdobe isifundisa ngevidiyo ekhutshwe kwezi ntsuku zidlulileyo.
Ewe, into oyifumanayo yile susa izinto kwividiyo ngokulula. Kwaye inkqubela phambili kubuchwephesha ivumela ukuba songe ixesha elininzi ekufuneka silisebenzise ukucima ezo zinto kwividiyo.
Kukuhlaziywa okutsha kweAdobe Emva kweZiphumo apho kunokwenzeka khona ukucima izinto ngendlela elula. Inqaku elitsha elibizwa ngokuba yi-Content-Aware Fill yinto esivumela ukuba sicime izinto enkosi kuMatshini wokuFunda ovela Adobe Sensei.
Oko kukuthi, siyalibala sizophule iintloko zethu ukuze emva kweZiphumo uqobo ukwazi ukubazicime ngokwakho ezo zinto ngezithunzi kunye nokungafezeki kwazo. Ke siya kushiyeka sinendawo entsha ngokupheleleyo apho sizisusile khona ezo zinto zithintela oko sikukhangela njengesiphumo sokugqibela.
I-AI yeAdobe yile ikwaziyo ukwenza ukulandelela into ebesikhe sayiphawula ngaphambili ukuba siyisuse. Yile ndlela ividiyo «icocwe ngayo» kwaye siya kuba nayo ephelisa ngomlingo izinto, abantu, njl. Kwaye ukufunda ukuba singazenza njani thina, sinothotho lweevidiyo ezivela kwiAdobe esibonisa ngokugqibeleleyo indlela osebenza ngayo umlingo walo msebenzi mtsha.
Sicebisa ukuba uthathe ixesha lakho funda ngalinye lamanyathelo kwaye uhlele iividiyo zakho ukuze ususe izinto esitratweni okanye loo mntu uvele umzuzu othile kwividiyo yomntwana wakho wokuzalwa. Inqaku elitsha elikhoyo kuhlaziyo olutsha lwe-Adobe Creative Cloud efumanekayo kubo bonke abanobhaliso lwenyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Adobe ikufundisa ukuba ungazisusa njani iividiyo emva kweZiphumo
Ungasithumela njani isisu sencwadi ukuze ucinezele
Uyenza njani ikhava yencwadi oza kuyithumela ukuprinta